လမ်းဆုံ .....: March 2012
ReadMoe “ဗမာ့ကြယ် ကွန်ယက် စာအုပ်စင်”
Posted by Kaung Khant at 20.3.120comments Links to this post
နှစ်သစ်မှာ ကောင်းခြင်းတွေလာမလား ဆိုးခြင်းတွေလာမလား
သိချင်ဝယ်ဖတ် .. လို့တောင် ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး
သိချင်ရင် ၀င်ဖတ်လို့ပဲ ပြောပါတော့မယ်
Posted by Kaung Khant at 16.3.120comments Links to this post
ReadMoe “Russian = Myanmar Online Dictionary”
စတဲ့ ဂျာနယ်တွေကို အပတ်စဉ် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
http://mmzone.co.nr/ ကိုသာ အရောက်သွားလိုက်တော့နော်
ReadMoe “MM Free Zone”
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တောင်းတာနဲ့ လိုက်ရှာရင်း
နေမင်းမောင် ဆိုဒ်က တွေ့လို့ ကူးတင်လိုက်တယ်
ReadMoe “မိမိဓါတ်ပုံနဲ့ Funny ပုံလေးတွေ ဖန်တီးမယ်”
Posted by Kaung Khant at 13.3.120comments Links to this post
Posted by SLIP in မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၁။အပိုင်း က)
Scribd (or) MediaFire (or) 4shared
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၁။အပိုင်း ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၂-အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၂-အပိုင်း-ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၃-အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၃-အပိုင်း-ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၄-အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၄-အပိုင်း-ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၅-အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၅-အပိုင်း-ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၅-အပိုင်း-ဂ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၆)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၇)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၈ အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၈ အပိုင်း-ခ)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၉ အပိုင်း-က)
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း (အတွဲ-၉ အပိုင်း-ခ)
ReadMoe “မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း”
Posted by Kaung Khant at 7.3.120comments Links to this post
iphone, android, winodw .. ဘာပဲသုံးနေနေ
ဒီနေရာလေးကိုတော့ မဖြစ်မနေ သွားသင့်တယ်နော်
ReadMoe “Free Download”
Posted by Kaung Khant at 5.3.120comments Links to this post
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သတင်းဖြစ်စဉ်တွေ သိဖို့အတွက်ကတော့
ဂျာနယ်တွေ ၀ယ်ဖတ်ဖို့မလို ... လူတကာကို လိုက်မေးဖို့မလို
အင်တာနက်နဲ့ http://www.myanmarnewszone.com ကို သိထားဖို့ပဲ လိုတယ်
Posted by Kaung Khant at 4.3.120comments Links to this post
ReadMoe “Myanmar News Now”
Posted by Kaung Khant at 2.3.120comments Links to this post
English စာကို ၀ါသနာပါသူများ
English စာကို လေ့လာနေသူများ
English စာနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူများ ..
ReadMoe “The Best English4You”
MuzicDB မှာ ဘာလုပ်လို့ရသလဲ .. ?
သူ့ရဲ့ ဆိုဒ်ခေါင်းစဉ်မှာ ဒီလိုလေး မြင်လိုက်ရတယ်
သူကတော့ မြန်မာဂီတနဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့ပြောထားပါတယ် ..
ကဲ .. ပြောနေကြာပါတယ် ..
မိဿ ရဲ့ အတွေး အရေးတွေကို အားပေးရအောင်
ဒီနေရာလေးကို သွားကြမယ် .
ကဲ . သူငယ်ချင်းတို့ရေ
ကိုကြီးလေး ကတော့ ဒီကို ပြောင်းပါပြီတဲ့ဗျာ
ကွန်ပျူတာရဲ့ Desktop Screen မှာ ပုံမှန် Wallpaper တွေနဲ့ ရိုးအီနေပြီဆိုရင်တော့
လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အလှဆင်ပေးမယ့် .
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ..
၀င်ကြည့်လိုက်ဦး .. ကြိုက်တယ်ဆို ဒေါင်းပေရော့
ReadMoe “Desktop ကို အလှဆင်မယ်”
Posted by Kaung Khant at 1.3.120comments Links to this post